मलेसिया जान लागेका बंगलादेशका एक युवकले जब जहाजमै नाङ्गो भएर अश्लिल क्रियाकलाप गर्दै एयर होस्टेसलाई समातेपछि…! « Light Nepal
मलेसिया जान लागेका बंगलादेशका एक युवकले जब जहाजमै नाङ्गो भएर अश्लिल क्रियाकलाप गर्दै एयर होस्टेसलाई समातेपछि…!
Published On : 10 March, 2018 11:43 pm
एजेन्सी – मलेसियन एयरलाइन्समा अश्लिल क्रियाकलाप गर्ने बंगलादेशका एक यात्री पक्राउ परेको जनाइएको छ। गत शनिबार राजधानी क्वालालम्पुरबाट उडेको उक्त मलेसियन एयरलाइन्स मलिन्डो एयरको उडानमा निर्वस्त्र भएर महिलासँग अश्लिल व्यवहार गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। ती युवक मलेसिया युनिभर्सिटीका छात्र भएको न्यु स्टेट्स टाइम्सले जनाएको छ।
क्लालालम्पुरबाट उडान भरेलगत्तै २० वर्षीय ती बंगलादेशी युवकले उडानमा अचानक आफ्नो लुगा फुकाले र ल्यापटपमा अश्लिल सामग्री हेर्न थाले। त्यसपछि उनले महिला फ्लाइट अटेन्डेन्टसँग दव्र्यवहार गर्ने प्रयास गरे। आफ्नो घटिया व्यवहारबाट उनले सबैलाई दुःख दिए। त्यसपछि केही यात्री र चालकदलका सदस्यहरू मिलेर उनलाई उनकै सिटमा बाँधे। ती यात्रीलाई पछि पक्राउ गरिएको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ।
विश्वविद्यायका ती युवकलाई लुगा लगाउन चालक दल सदस्यले धरै पटक अनुरोध पनि गरेका थिए। तर लुगा लगाइसकेपछि पनि उनले अश्लिल क्रियाकलाप गर्न थाले। उनले महिला चालक दल सदस्यलाई जबरजस्ती अंगालो हाल्ने प्रयास गरे। अन्य सदस्यलाई उनलाई रोकेपछि उनले दुव्र्यवहार गर्न थाले। युवकलाई बंगलादेशको राजधानी ढाकामा पक्राउ गरियो। केही यात्रीका अनुसार ती युवकले आफ्नो सिटमा पिसाब पनि गरेका थिए। नग्न अवस्थामै वाथरुम गएका थिए।
बियर पिउनुस, क्यान्सर,सुगर र हृदयघातबाट बच्नुस , यस्ता छन् बियर पिउनुका १२ फाइदा
नेपाली संस्कृतिमा वियर पिउनुलाई राम्रो मानिदैन । बियरलाई मादक पदार्थका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । बियर
जर्मनीलाई जितेपछि मेक्सिकोमा जनताले यसरी मनाए जीतको खुसियाली, खुसियालीमा उफ्रिँदा मेक्सिकोमा भूकम्प नै गयो
मेक्सिको सिटी, ४ असार । जर्मनीविरुद्ध ‘अप्रत्यासित’ ऐतिहासिक जीत हासिल गरेपछि मेक्सिकोमा जनताहरु खुसियालीमा यति
यो हो ६६९० वटा हिराका टुक्रा जडित औंठी, जसलाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा राखियो
काठमाडौं, ३ असार । एजेन्सी- हिराको नगर भनेर चिनिने भारतको सुरतका एक व्यापारीको नाम फेरि
यस्तो मन्दिर जहाँ महिलाका ब्रा र पेन्टी सजाएर राखिन्छ
हामीकहाँ मन्दिरलाई पवित्रता र आस्थाको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । जहाँ फोहोर, अनावश्यक सामाग्रीहरु लैजान प्रतिबन्ध गरिन्छ